Blame · po/my.po · fc3a89ab0e1dfc23b820aadacf0526a79fcf8fa2 · GNOME / GIMP · GitLab
1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607
msgid "Auto _Follow Active Image"
msgstr "အလိုအလျှောက် လိုက်ပါတဲ့ သက်ကြွတဲ့ ရုပ်ပုံ"
msgstr "အညွှန်းစာမျက်နှာ စာရင်းမှတ်"
msgstr "စာအမှတ်ကို ပေါင်းထည့်ပါ"
msgid "_Preview Size"
msgstr "အရွယ်အစားကို အစမ်းကြည့်ရှုပါ"
msgstr "စာအမှတ် စတိုင်"
msgstr "စာအမှတ်ကို ပိတ်ပါ"
msgstr "စာအမှတ်ကို ဖြတ်ထုတ်ပါ"
msgstr "အလွန် ငယ်တယ်"
msgstr "ဧရာမ ကြီးမားတယ်"
msgstr "အတိုင်းထက် ကြီးမားတယ်"
msgstr "ပုံသင်္ကေတနဲ့ စာသား"
msgstr "အနေအထားနဲ့ စာသား"
msgid "Loc_k Tab to Dock"
msgstr "ရပ်နားနေရာထဲမှာ စာအမှတ်ကို သော့ခတ်ပါ"
msgid "Protect this tab from being dragged with the mouse pointer"
msgstr "ဒီစာအမှတ်ကို ကြွတ်ခလုတ်နဲ့ ဒရွတ်ဆွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ"
msgid "Show _Button Bar"
msgstr "အနေအထား တန်းလျာကို ဖေါ်ပြပါ"
msgstr "စာရင်းအဖြစ် ရှုမြင်ပါ"
msgstr "ဂရစ်ကွက်အဖြစ် ရှုမြင်ပါ"
msgstr "စာတမ်းများ စာရင်းမှတ်"
msgstr "ရုပ်ပုံကို ဖွင့်ပါ"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ရေးသွင်းချက်ကို ဖွင့်ပါ"
msgstr "ရုပ်ပုံကို မြှင့်တင် (သို့) ဖွင့်ပါ"
msgid "Raise window if already open"
msgstr "၀င်းဒိုးကို ဖွင့်နေပြီးသားဆိုရင် မြှင့်တင်ပါ"
msgstr "ဖိုင် ဖွင့်တဲ့ အညွှန်းစာမျက်နှာ"
msgid "Open image dialog"
msgstr "ရုပ်ပုံ အညွှန်းစာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Copy Image _Location"
msgstr "ရုပ်ပုံ တည်နေရာကို မိတ္တူကူးပါ"
msgid "Copy image location to clipboard"
msgstr "ရုပ်ပုံ တည်နေရာကို clipboard ဆီ မိတ္တူကူးပါ"
msgstr "ရေးသွင်းချက်ကို ဖယ်ရှားပါ"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ရေးသွင်းချက်ကို ဖယ်ရှားပါ"
msgstr "မှတ်တမ်းကို ရှင်းလင်းပါ"
msgid "Clear the entire document history"
msgstr "စာတမ်း မှတ်တမ်း တခုလုံးကို ရှင်းလင်းပါ"
msgstr "အစမ်းမြင်ကွင်းကို တဖန် ဖန်တီးပါ"
msgstr "အစမ်းမြင်ကွင်း အားလုံးကို ပြန်ဖွင့်ပါ"
msgid "Reload all previews"
msgstr "တွဲလွဲကျတဲ့ ရေးသွင်းချက်များကို ဖယ်ရှားပါ"
msgid "Remove entries for which the corresponding file is not available"
msgstr "ကိုက်ညီမှု မရှိတဲ့ ဖိုင်အတွက် ရေးသွင်းချက်များကို ဖယ်ရှားပါ"
msgid "Clear Document History"
msgstr "စာတမ်း မှတ်တမ်းကို ရှင်းလင်းပါ"
msgstr "လက်ရှိ စာတမ်းများ စာရင်းကို ရှင်းလင်းပါ"
1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661
"Clearing the document history will permanently remove all images from the "
"recent documents list."
"စာတမ်း မှတ်တမ်းကို ရှင်းလင်းမှု​က လက်ရှိ စာတမ်းများ စာရင်းမှ ရုပ်ပုံများ အားလုံးကို "
msgid "Automatic contrast enhancement"
msgstr "အလိုအလျှောက် ခြားနားမှု တိုးမြှင့်ကောင်းမွန်စေခြင်း"
msgid "Invert the colors"
msgstr "အရောင်များကို ပြောင်းပြန်လှန်ပါ"
msgid "_White Balance"
msgstr "အဖြူရောင် ညီမျှမှု"
msgid "Automatic white balance correction"
msgstr "အလိုအလျှောက် အဖြူရောက် ညီမျှမှု ပြုပြင်မွမ်းမံချက်"
msgid "Shift the pixels, optionally wrapping them at the borders"
"ပစ်ဆယ်များကို အနားသတ်များမှာ ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် ထုပ်ပိုးပြီး ၄င်းတို့ကို ရွှေ့ပြောင်းပါ"
msgid "Toggle visibility"
msgstr "မြင်ကွင်းကို ထိန်းကျောင်းပါ"
msgid "Toggle the linked state"
msgstr "ချိတ်ဆက်မှု အခြေအနေကို ထိန်းကျောင်းပါ"
msgid "L_ock pixels"
msgid "Keep the pixels on this drawable from being modified"
msgstr "ဒီအ​လွှာပေါ်မှ ဖေါက်ထွင်းမြင်နိုင်မှု အချက်အလက်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းမှာ ကာကွယ်ပါ"
msgstr "ပြင်ညီအလိုက် လှန်ဖွင့်ပါ"
msgstr "ဒေါင်အလိုက် လှန်ဖွင့်ပါ"
msgid "Rotate 90° _clockwise"
msgstr "နာရီပုံစံ​ ၉ဝံ လှည့်ပါ"
msgid "Rotate 90 degrees to the right"
msgstr "ညာဖက် ၉ဝ ဒီဂရီ လှည့်ပါ"
msgid "Rotate _180°"
msgstr "၁၈ဝံ လှည့်ပါ"
msgid "Turn upside-down"
msgstr "အထက်အောက် ပြောင်းပြန်လှန်ပါ"
msgid "Rotate 90° counter-clock_wise"
msgstr "နာရီ ဆန့်ကျင်ဖက် ၉ဝံ လှည့်ပါ"
1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
msgid "Rotate 90 degrees to the left"
msgstr "ဘယ်ဖက် ၉ဝ ဒီဂရီ လှည့်ပါ"
msgstr "ညီမျှစေချက်ဟာ ညွှန်းထားတဲ့ အလွှာများပေါ်မှာ အလုပ်မလုပ်ဘူး။"
msgstr "ပြောင်းပြန်လှန်ချက်ဟာ ညွှန်းထားတဲ့ အလွှာများပေါ်မှာ အလုပ်မလုပ်ဘူး။"
msgid "White Balance operates only on RGB color layers."
msgstr "အဖြူရောင် ညီမျှချက်ဟာ နီစိမ်းပြာ ​အရောင် အလွှာများပေါ်၌သာ အလုပ်လုပ်တယ်။"
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849
msgid "Paint Dynamics Menu"
msgstr "နမူနာပုံစံများ စာရင်းမှတ်"
msgid "_New Dynamics"
msgid "Createanew dynamics"
msgid "D_uplicate Dynamics"
msgstr "လမ်းကြောင်းကို ပုံတူပွားပါ"
msgid "Duplicate this dynamics"
msgstr "ဒီလမ်းကြောင်းကို ပုံတူပွားပါ"
msgid "Copy Dynamics _Location"
msgid "Copy dynamics file location to clipboard"
msgid "_Delete Dynamics"
msgstr "ကျောက်ဆူးများကို ပယ်ဖျက်ပါ"
msgid "Delete this dynamics"
msgstr "ဒီလမ်းကြောင်းကို ပယ်ဖျက်ပါ"
msgid "_Refresh Dynamicss"
msgid "Refresh dynamics"
msgid "_Edit Dynamics..."
msgstr "ရောင်စဉ်တန်းကို တည်းဖြတ်ပါ..."
msgid "Edit dynamics"
msgstr "တက်ကြွတဲ့ စုတ်တံကို တုပပါ"
msgid "Paint Dynamics Editor Menu"
msgstr "ရောင်စဉ်တန်း တည်းဖြတ်ကိရိယာ စာရင်းမှတ်"
msgid "Edit Active Dynamics"
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
msgid "Paste _as"
msgstr "ပွားယူမဲ့ ပုံစံ"
msgid "Undo History Menu"
msgstr "မှတ်တမ်း စာရင်းမှတ်ကို ပြန်ဖြည်ပါ"
msgid "Undo the last operation"
msgstr "နောက်ဆုံး လည်ပတ်မှုကို ပြန်ဖြည်ပါ"
msgid "Redo the last operation that was undone"
msgstr "မပြီးသေးတဲ့ နောက်ဆုံး လည်ပတ်မှုကို ပြန်ပြင်ပါ"
msgid "Strong Undo"
msgstr "ထက်မြက်တဲ့ ပြန်ဖြည်မှု"
msgid "Undo the last operation, skipping visibility changes"
msgstr "မြင်ကွင်း ပြောင်းလဲမှုများကို ကျော်သွားပြီး၊ နောက်ဆုံး လည်ပတ်မှုကို ပြန်​ဖြည်ပါ၊"
msgid "Strong Redo"
msgstr "ထက်မြက်တဲ့ ပြန်ပြင်မှု"
msgid "Redo the last operation that was undone, skipping visibility changes"
"မြင်ကွင်း ပြောင်းလဲမှုများကို ကျော်ပြီး၊ ​မပြီးသေးတဲ့ နောက်ဆုံး လည်ပတ်မှုကို ပြန်ပြင်ပါ"
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087
msgstr "ပြန်ဖြည်မှု မှတ်တမ်းကို ရှင်းလင်းပါ"
msgid "Remove all operations from the undo history"
msgstr "ပြန်ဖြည်မှု မှတ်တမ်းမှ လည်ပတ်မှုများ အားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ"
msgid "Modify paint mode and opacity of the last pixel manipulation"
msgstr "နောက်ဆုံး ပစ်ဆယ် စီမံကိုင်တွယ်မှုရဲ့ ပုံဆွဲစနစ်နဲ့ အလင်းပိတ်မှုကို ပြုပြင်ပါ"
msgid "Move the selected pixels to the clipboard"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ပစ်ဆယ်များကို clipboard ဆီ ရွှေ့သွားပါ"
msgid "Copy the selected pixels to the clipboard"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ပစ်ဆယ်များကို clipboard ဆီ မိတ္တူကူးပါ"
msgid "Copy _Visible"
msgstr "မြင်နိုင်မှုကို မိတ္တူကူးပါ"
msgid "Copy what is visible in the selected region"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ နယ်ပယ်မှာ မြင်နိုင်တဲ့ အရာကို မိတ္တူကူးပါ"
msgid "Paste the content of the clipboard"
msgstr "Clipboard ရဲ့ အကြောင်းအရာကို ပွားယူပါ"
msgstr "ပွားယူရမဲ့ နေရာ"
msgid "Paste the content of the clipboard into the current selection"
msgstr "Clipboard ထဲရှိ အကြောင်းအရာကို လက်ရှိ ရွေးချယ်ချက်ထဲမှာ ပွားယူပါ"
msgid "From _Clipboard"
msgstr "Clipboard မှတဆင့်"
#: ../app/actions/edit-actions.c:142 ../app/actions/edit-actions.c:148
msgid "Createanew image from the content of the clipboard"
msgstr "Clipboard ရဲ့ အကြောင်းအရာမှ ရုပ်ပုံအသစ်တခုကို ဖန်တီးပါ"
msgid "_New Image"
msgid "New _Layer"
msgid "Createanew layer from the content of the clipboard"
msgstr "Clipboard ရဲ့ အကြောင်းအရာမှ အလွှာအသစ် တခုကို ဖန်တီးပါ"
msgstr "အမည်ပေးချက်ကို ဖြတ်ယူပါ"
msgid "Move the selected pixels toanamed buffer"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ပစ်ဆယ်များကို အမည်ပေးတဲ့ ဘာဖာ တခုဆီ ရွှေ့ပါ"
msgstr "အ​မည်ပေးချက်ကို မိတ္တူကူးပါ..."
msgid "Copy the selected pixels toanamed buffer"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ပစ်ဆယ်များကို အမည်ပေးတဲ့ ဘာဖာ တခုဆီ မိတ္တူကူးပါ"
msgid "Copy _Visible Named..."
msgstr "မြင်နိုင်တဲ့ အမည်ပေးချက်ကို မိတ္တူကူးပါ"
msgid "Copy what is visible in the selected region toanamed buffer"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ နယ်ပယ်ထဲ မြင်နိုင်တဲ့ အရာကကို အမည်ပေးတဲ့ ဘာဖာ တခုဆီ မိတ္တူကူးပါ"
msgstr "အမည်ပေးချက်ကို ပွားယူပါ..."
msgid "Paste the content ofanamed buffer"
msgstr "အမည်ပေးတဲ့ ဘာဖာ တခုရဲ့ အကြောင်းအရာကို ပွားယူပါ"
msgid "Clear the selected pixels"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ ပစ်ဆယ်များကို ရှင်းလင်းပါ"
msgstr "FG အရောင်နဲ့ ဖြည့်ပါ"
msgid "Fill the selection using the foreground color"
msgstr "အနီးမြင်ကွင်း အရောင်ကို သုံးပြီး ရွေးချယ်ချက်ကို ဖြည့်ပါ"
msgstr "BG အရောင်နဲ့ ဖြည့်ပါ"
msgid "Fill the selection using the background color"
msgstr "နောက်ခံအရောင်ကို သုံးပြီး ရွေးချယ်ချက်ကို ဖြည့်ပါ"
msgid "Fill _with Pattern"
msgstr "နမူနာပုံစံနဲ့ ဖြည့်ပါ"
msgid "Fill the selection using the active pattern"
msgstr "သက်ကြွတဲ့ နမူနာပုံစံကို သုံးပြီး ရွေးချယ်ချက်ကို ဖြည့်ပါ"
msgstr "%s ကို ပြန်ဖြည်ပါ"
msgstr "%s ကို ပြန်ပြင်ပါ"
msgid "_Fade %s..."
msgstr "%s ကို မှေး​မှိန်စေပါ"
msgstr "မှတ်တမ်း ပြန်​ဖြည်ချက်ကို ရှင်းလင်းပါ"
msgstr "ရုပ်ပုံရဲ့ မှတ်တမ်း ပြန်ဖြည်ချက်ကို တကယ် ရှင်းလင်းမလား။"
msgid "Clearing the undo history of this image will gain %s of memory."
"ဒီရုပ်ပုံရဲ့ မှတ်တမ်း ပြန်ဖြည်ချက်ကို ရှင်းလင်းခြင်းကြောင့် မှတ်ဉာဏ် %s ရရှိလာလိမ့်မယ်။"
msgid "Cut pixels to the clipboard"
msgstr "ပစ်ဆယ်များကို Clipboard ဆီ ဖြတ်ယူပါ"
#: ../app/actions/edit-commands.c:235 ../app/actions/edit-commands.c:264
msgid "Copied pixels to the clipboard"
msgstr "ပစ်ဆယ်များကို Clipboard ဆီ မိတ္တူကူးပါ"
#: ../app/actions/edit-commands.c:324 ../app/actions/edit-commands.c:359
msgstr "Clipboard ထဲမှ ပွားယူဖို့ ရုပ်ပုံ အချက်အလက်ကြမ်း မရှိဘူး။"
#: ../app/actions/edit-commands.c:347 ../app/core/gimpbrushclipboard.c:180
#: ../app/core/gimppatternclipboard.c:180 ../app/widgets/gimpclipboard.c:345
#: ../app/actions/edit-commands.c:376 ../app/actions/edit-commands.c:417
msgstr "ဒီဘာဖာအတွက် အမည်တခုကို ရေးထည့်ပါ"
msgstr "အမည်ပေးချက်ကို မိတ္တူကူးပါ"
msgid "Copy Visible Named "
msgstr "ဖြတ်ယူဖို့ သက်ကြွတဲ့ အလွှာ (သို့) ချာနယ် မရှိဘူး။"
#: ../app/actions/edit-commands.c:560 ../app/actions/edit-commands.c:592
msgstr "(အမည်မဲ့ ဘာဖာ)"
2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229
msgstr "မိတ္တူကူးဖို့ သက်ကြွတဲ့ အလွှာ (သို့) ချာနယ် မရှိဘူး။"
msgstr "မှားယွင်းတဲ့ ထိန်းချုပ်ခလုတ်ခုံ စာရင်းမှတ်"
msgid "Clear error console"
msgstr "မှားယွင်းတဲ့ ထိန်းချုပ်ခလုတ်ခုံကို ရှင်းလင်းပါ"
msgstr "အားလုံးကို ရှင်းလင်းပါ"
msgid "Select all error messages"
msgstr "မှားယွင်းတဲ့ သတင်းတိုများ အားလုံးကို ရွေးပါ"
msgid "_Save Error Log to File..."
msgstr "မှားယွင်းတဲ့ မှတ်တမ်းကို ဖိုင်ထဲ သိမ်းဆည်းပါ..."
msgid "Write all error messages toafile"
msgstr "မှားယွင်းတဲ့ သတင်းတိုများ အားလုံးကို ဖိုင်တခုဆီ ရေးသားပါ"
msgid "Save S_election to File..."
msgstr "ရွေးထားချက်ကို ဖိုင်ထဲ သိမ်းဆည်းပါ..."
msgid "Write the selected error messages toafile"
msgstr "ရွေးထားတဲ့ သတင်းတိုအမှားများကို ဖိုင်တခုဆီ ရေးသားပါ"
msgid "Cannot save. Nothing is selected."
msgstr "သိမ်းဆည်းလို့ မရဘူး။ ဘာမှ မရွေးထားဘူး။"
msgid "Save Error Log to File"
msgstr "မှားယွင်းတဲ့ မှတ်တမ်းကို ဖိုင်ထဲ သိမ်းဆည်းပါ"
2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238
"Error writing file '%s':\_n"
"မှားယွင်းပြီး ရေးသားတဲ့ ဖိုင် '%s':\_n"
msgstr "လတ်တလောအရာကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Open an image file"
msgstr "ရုပ်ပုံဖိုင်တခုကို ဖွင့်ပါ"
msgid "Op_en as Layers..."
msgstr "အလွှာများလို ဖွင့်ပါ..."
msgid "Open an image file as layers"
msgstr "ရုပ်ပုံဖိုင် တခုကကို အလွှာများလို ဖွင့်ပါ"
msgstr "တည်နေရာကို ဖွင့်ပါ"